एउटा तालिमले फेरिएको जीवन, एक कठ्ठामा एक लाखको टमाटर
Sun, Sep 23, 2018 | 08:24:19 NST
09:18 AM ( 1 year ago )
समन तिमल्सिना/उज्यालो ।
विराटनगर, भदौ १३ – मोरङको कोशी हरैचा–१ का किसान लोकेन्द्र ढकाल बारीमा लगएको तरकारीको बेर्ना स्याहार्न व्यस्त हुनुहुन्छ । तरकारी खेतीमा उहाँ लागेको ९ वर्ष पुगिसकेको छ । अहिले केही सजिलो र सन्तोष छ तर सुरुका दिन उहाँका लागि त्यती सजिला थिएनन् ।
२०६० सालमा दुई छोरी र श्रीमतीलाई घरमै छाडेर उहाँ कतार लाग्नुभयो । आफ्नो घर परिवार छाडेर विदेशिने मन त कसको नै पो हुन्छ र ? तर मनभरि पैसा कमाउने रहरै रहर साँचेर उहाँ विदेशिनु भएको थियो । ढकाल कतारमा तीन वर्ष बस्नु भयो । त्यो अवधि उहाँका लागि निक्कै कष्टकर रह्यो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘विदेशमा पैसा कमाउन मैले दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्नु पर्थ्यो । जेनतेन तीन वर्ष विदेशमा बिताएपछि म फर्किएँ । विदेशमा भन्दा नेपालमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर नै म नेपाल फर्किएको हुँ । विदेशबाट नेपाल फर्किँदा झण्डै ६ लाख जती कमाएर फर्किएको हुँ । त्यो रकम एउटा घर बनाउन मै सकियो । अब के गर्ने त ? म अलपल्लमा परेँ । खेती गर्छु भन्ने लाग्यो तर परम्परागत खेतीबाट त्यती धेरै फाइदा लिन गाह्रो हुने अनि अरु केही गरौँ न त भन्दा हातमा केही सीप नै थिएन । त्यही भएर पनि तरकारी खेतीमा नै केही गर्नुपर्छ भन्नेलाग्यो र त्यही सोच बनाएर २०६५ सालमा व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेतीमा लाग्ने निर्णय गरेँ ।’
त्यसयता उहाँले तरकारी खेतीलाई नै आफ्नो जीविकाको आधार बनाउनुभएको छ । ‘तालिम, सीप, बिउको अवस्था केही पनि थाहा थिएन । तर एमडिएमएसले वल्र्ड भिजनको साझेदारीमा कृषि भ्रमणमा लगेपछि तरकारी खेतीबाट धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी पाएँ’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले खेती कम छ आम्दानी बढी ।’
बिउ पुँजीको बारेमा जानकारी नहुँदासम्म अलमलमा परेका बेला एमडिएमएसले दिएको तालिमपछि एक कठ्ठामा १ लाख रुपैयाँसम्मको टमाटर फलाएर बेचेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अहिले १५ कट्ठामा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । यही खेतीबाट उहाँको परिवार चलेको छ । उहाँले अहिले १२ महिना नै तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ ।
आर्थिक अभाव भएका बेल तरकारी खेतीमा लाग्नु भएका ढकालले अहिले एउटी छोरीलाई ईन्जिनियरिङ बढाउनु भएको छ । कान्छी छोरी स्थानीय स्कुलमा कक्षा १० मा बढ्दै छिन् भने एउटा छोरा कक्षा २ मा पढ्दै आएका छन् । उहाँले आगामी दिनमा कृषिलाई व्यावसायिकताका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै थप फाइदा लिने विश्वास लिनु भएको छ ।